संसद पुनर्स्थापनासँगै वार्ता अनिश्चित : विप्लवको पत्र पेण्डुलम ! - Kantipath.com
संसद पुनर्स्थापनासँगै वार्ता अनिश्चित : विप्लवको पत्र पेण्डुलम !
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरेसँगै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गर्ने भनिएको वार्ता अनिश्चित बनेको छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै राजनीतिक घटनाक्रम फरक दिशातर्फ मोडिएपछि वार्ता अनिश्चित बनेको छ । आफै वार्ताका लागि पत्र लेखेका विप्लवको माग संसद पुनर्स्थापना भए संगै पेन्डुलम भएको छ ।
गत साता मात्रै विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार यसअघि एक मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने तयारीसमेत भएको थियो । गृहले वार्ताबारे अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु गरिसकेको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो समूहका हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला, माइला लामा, ओम पुनलगायत दर्जनौँ नेता र सयौँ कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमै छन् ।
Previous Previous post: गैँडा मारेर खाग बेच्ने तीन जना सिआईबीद्वारा पक्राउ
Next Next post: बझाङ हत्याकाण्ड : हत्या आरोपी ५ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान